août 2018 · Page 4 de 5 · déliremadagascar
politique	 10 août 2018 R Nirina
VOROMAHERY : Vondrona miaro sy manohana an’i Hery Rajaonarimampianina
« Mendrika tohizana ny zava-bita ». Miantso ny hirotsahan’i Hery Rajaonarimampianina ho kandida amin’ny fifidianana filohampirenena ny 07 novambra 2018 ny VOROMAHERY mba ahafahana manatratra ny vina Fisandratana 2030. Continuer la lecture →
Socio-eco	 10 août 2018 R Nirina
HOPITALY ANDOHATAPENAKA : Niampy ny fitaovana fitarafana homamiadana
Hitan’ny « gama caméra scanner » avokoa ireo faritra misy sela homamiadana (cellule cancereuse) ao amin’ny vatan’olombelona iray. Continuer la lecture →
politique	 9 août 2018 R Nirina
KANDIDA AN’NY GFFM : Pasitera fa tsy mpanao politika
Nanatitra ny taratasy filatsahan-ko fidiana ny kandida natolotry ny antoko politika GFFM (Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara). Continuer la lecture →
FANIRISOA ERNAIVO: Handray an-tanana ny mpitrongy vao homana
Alarobia 08 aogositra 2018, nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-ko fidiany teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana i Fanirisoa Ernaivo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 7 août 2018 R Nirina
Kaominina Ivato: Miverina amin’ny vahoaka ny volany
Nitsidika ireo foto-drafitr’asa efa vita sy an-dalam-pahavitàna ny ben’ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin’ny kaominina Ivato. Continuer la lecture →
politique	 7 août 2018 R Nirina
« PARTI LIBERAL DEMOCRATE » : Hitondra fanovana
Niampy indray ny vehivavy milaza ny ho filatsahan-kofidiana ho filoham-pirenena amin’ity taona ity. Mahatsapa ny filoha nasionalin’ny « Parti Liberal Démocrate » (PLD), Sarah Rabeharisoa fa mila fanovàna ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Continuer la lecture →
Socio-eco	 6 août 2018 R Nirina
TIC BUS : Hampihena ny elanelana amin’ny samy Malagasy
Hametrahana TIC Bus ireo tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara. Ao anatin’ny vinan’ny ministeran’ny paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN) ny hanampiana ny Malagasy tsy ankanavaka mba hampiasa ny « connexion internet » sy hahay hifehy ireo fitaovana nomerika. Continuer la lecture →
politique	 5 août 2018 R Nirina
JEAN NIRINA RAFANOMEZANTSOA : Tsy ho kandida filohampirenena indray
Azo antoka fa tsy ho isan’ny kandida ho filohampirenena i Jean Nirina Rafanomezantsoa. Nilaza ny tenany fa taratasy tokana sisa no tsy ampy kanefa raha tsy feno io dia tsy ho voaray ny antontan-taratasy filatsahan-ko fidiany. Continuer la lecture →
Socio-eco	 4 août 2018 R Nirina
FIAROVANA NY ZON’NY TANTSAHA: Hanao ny asan’ny fanjakana ny sehatra tsy miankina
Tsy misy mpiahy ireo tantsaha ao amin’ny distrikan’Imanja, faritra Menabe. Ny tany anefa mamokatra saingy ny ho enti-manana no tsy ampy na tsy misy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 3 août 2018 R Nirina
FIER MADA: Mahaliana ny rehetra
Feno 20 taona ny FIER MADA. Nitombo ny mpandray anjara tamin’ny andiany faha-20. Nisy mpandray anjara 50 isa tsy nahazo trano heva satria tsy homby intsony ny toerana, araka ny fitantaran’ny mpikarakara. Continuer la lecture →